Xukunka lagu riday Rag loo haysto weerar ka dhacay Xabsiga Dhexe. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Xukunka lagu riday Rag loo haysto weerar ka dhacay Xabsiga Dhexe.
Kow iyo toban Eedeysane oo isugu jiro Ciidamada Asluubta , Xunkusanayaal iyo Garsugayaal ayaa lala xariiryay weerarkii loo adeegsaday bambooyinka iyo Bistooladaha ee ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar 10-kii August
Hey’adaha Baarista Ciidamada Amniga iyo Guddi ay u saartay baaridda dhacdadaasi Xukummadda ay ugu dambeyn ku wareejiyeen Gabagabada dhacdada Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida oo awood u leh dhaqaajinta Gal-dacwadeedkaas.
Eedeysane Mubarak Ibraahiim Iidle oo horay ugu xukunaa 10 sano oo xabsi Ciidan ah ayaa ahaa Gacanta hore weerarka, waxa uuna Nolosha u aqoonsaday Maxamed Yusuf Toxow iyo Muqtar Cabdullaahi Muuse, sidaas ayuuna kaga baxsaday dhabarka dambe ee Xabsiga.
Edeysane Maxamuud Nuur Isaaq (Forex) oo isaga ahaa dadkii loo xiray lacaga Online ka ah ee Soomaali badan ka gaartay qasaaraha waxa uu ahaa qofka sida gaarka ah Maxaabiista kaga iibiya Qudaarta laakiin mid kamid ah raggi qorsheeyay weerarka uu soo dhex marsiistay Hubkiisa.
Wejiyo kala duwan oo Maxkamadeed iyo Baaritaanno muddo dheer qaatay ayaa Maanta Maxamadda ka soo saartay, Go’aan waxaana lagu kala xukumay sidaan
1-ugu Horeyn Mubarak Ibraahiim Iidle ayaa Maxkamada ku xukuntay Dil-toogasha ah isaga oo Maqan
2-Cabdullaahi Macalim Xuseen, 3-Maxamed Daahir Maxamed 4-cabdi Jire Yusuf ayaa Maxkmaddu ku wada xukumay Min 5-sano oo xabsi Ciidan ah iyo ka saaridda Ciidamada Asluubta oo ay ka wada tirsanaayeen.
5-Cali Barre Cali Maxamed oo ka tirsan Asluubta ayaa isna Mxkamdda ku xukuntay 3-sano oo xabsi Ciidan ah.
6- Maxamuud Nuur Isaaq (Forex) ayaa Maxkamadda ku xukuntay 5-sano oo Xabsi Ciidan ah.
7-Maxamed Nuur Maadeey8-Maxamed Maxamuud Mataan 9-Cumar Xasan Abtidoon iyo 10-Isaaq Geedi Ibraahim oo Iyana kawada tirsanaa Asluubta ayaa lagu xukumay min 6-bil oo xabsi Ciidan ah
Halka ugu dambeyntii Cabdi Axmed Maxamuud oo Asluuta aha ay Maxkamaddu dambi ku weyday, Sida uu nala wadaagay Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Kiis kaan dacwada ah ayaa waxa wada sugayay dhamana Bulshadda Soomaaliyed basle Maanta ayaa waxaa Maxkamadda ay ka soo saartay Go’aankaasi .
Maqaal horeSAWIRRO+Wafdi Xaqiiqo raadin ah oo Maanta gaaray Dhusamareeb
Maqaal XigaDowladda Fedaraalka Soomaaliya ayaa Hakisay dhismaha labaad ee maamulka Hirshabelle.